कसले गुमाउँदै अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग, चेल्सी, लेस्टर या लिभरपुल ? | सबै खेल
कसले गुमाउँदै अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग, चेल्सी, लेस्टर या लिभरपुल ?
९ जेष्ठ २०७८, आईतवार १९:५७
इंग्लिस प्रिमियर लिगका सिजनको अन्तिम खेल आज राति हुँदैछ । लिगको अन्तिम चरणको खेल अगावै रहँदा उपाधि र रेलिगसनमा पर्ने टिमको टुंगो लागिसकेको छ।
त्यसैले अन्तिम चरणका खेल च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग छनोटको दौडमा रहेका टिमका लागिमात्र महत्वपूर्ण छ। युरोपको क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने ४ टिममध्ये च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्।
त्यसैले अन्य दुई टिमको टुंगो आज हुने खेलपछि लाग्ने छ। दुई स्थानका लागि तीन टिम चेल्सी, लिभरपुल र लेस्टर सिटीबीच प्रतिस्पर्धा छ । यीमध्ये दुई टिमले मात्र च्याम्पियन्स लिग खेल्ने छन् भने एउटा टिमले युरोपा लिग खेल्ने छ।
यीमध्ये तालिको तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका चेल्सी र लिभरपुलको च्याम्पियन्स लिग छनोट सम्भावना आफ्नै हातमा छ भने लेस्टरलाई आफूले जितेर मात्र पुग्दैन, चेल्सी र लिभपुलमध्ये एकले अंक गुमाउनु पर्ने छ।
आज राति हुने खेलमा चेल्सीले एस्टनभिल्ला, लिभरपुलले क्रिस्टल प्यालेस र लेस्टरले टोटनह्यामसँग खेल्ने छ। लिगमा चेल्सीको ६७, लिभपुरपुल र लेस्टरको समान ६६ अंक छ।
चेल्सीले लिग शीर्ष चारभित्र नसकापनि उसको च्याम्पियन्स लिग छनोट सम्भावना बाँकी छ । सिटीलाई हराउँदै च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेमा च्याम्पियन्स लिगका लािग छनोट हुने छ।
यता, लेस्टर सिटी शीर्ष चारमा आउन सकेन भने पनि उसले युरोपा लिग खेल्ने छ। एफए कप विजेताका रुपमा युरोपा लिगका लागि छानिसकेको छ।
युरोप लिग खेल्ने २ टिम मध्ये १ टिम लिभरपुल या लेस्टरमध्ये एक हुने छन् । अर्को एक स्थानका लागि वेस्टह्याम, टोटनह्याम र एभर्टन प्रतिस्पर्धामा छन्। क्रमशः छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा रहेका वेस्टह्याम, टोटनह्याम र एभर्टनको ६२, ५९, ५९ अंक रहेको छ।
आज हुने खेलमा वेस्टह्यामले साउथह्याम्पटन, टोनटनह्यामले लेस्टरसँग खेल्ने छन् । यता, एभर्टनले च्याम्पियन्स बनिसकेको सिटीसँग खेल्ने । वेस्टह्यामले जिते उ च्यायुरोपा लिगाका लागि छनोट हुने छ । यदि लेस्टरले लिग शीर्ष चारभित्रै सकाए प्रिमियर लिगको सातौं हुने टिमले पनि युरोपा लिग खेल्न पाउने छ।
Tags: champions league, chelsea, English Premier League, leicester city, liverpool
सन्दीपले पाकिस्तान सुपर लिग नखेल्ने, लाहोरले रिलिज गर्‍यो